Ndị debanyere aha YouTube n'efu | Zụrụ ndị debanyere aha YouTube
Ọrụ adịchaghị anyị
Zụta njikarịcha YouTube
Ọrụ #1 iji tolite ọwa YouTube gị na ndị ezigbo mmadụ, ngwa ngwa!
SubPals bụ ikpo okwu uto nke ndị debanyere aha YouTube emebere ka ịmalite ọwa gị site na itinye aka na ndị mmadụ n'ezie! Malite njem uto gị ugbu a.
Key Akụkụ nke Ọrụ Free YouTube Ndị Ndenye aha Anyị
SubPals na-enye netwọkụ ọhụụ nke na - enye gị ohere ịnata ndị debanyere aha YouTube ọhụrụ 10 na - akwụghị ụgwọ kwa awa iri na abụọ! Ọrụ a bụ n'efu ma na-agụnye ụfọdụ nhọrọ akwụ ụgwọ dị oke ọnụ maka ndị chọrọ ọbụlagodi ndị debanyere aha kwa ụbọchị.
Emepụtara SubPals ka ọ dịrị nfe dịka mmadụ siri kwe omume! Oge gị dị mkpa ma anyị ghọtara nke ahụ, yabụ anyị mepụtara netwọkụ iji nye gị ndị 10% ndị debanyere aha na YouTube n'efu naanị nkeji ole na ole n'oge gị.
Ntanetị anyị na-akwụghị ụgwọ na-enye mgbanwe n'etiti gị na ndị ọzọ YouTubers na-achọ ịbawanye ndị debanyere aha ha, yabụ ị ga-enweta ndenye aha site na ndị ọzọ nwe ọwa YouTube. Ọ bụ ụzọ dị irè iji nwetakwuo ndị debanyere aha YouTube!
Iji SubPals nweta ndị debanyere aha YouTube n'efu bụ 100% nchekwa maka akaụntụ YouTube gị. You nwere ike inwe obi ike na ịmara netwọkụ anyị dị mma iji ma chekwaa oge niile.
Nsonaazụ Can Pụrụ Seehụ
Mgbe ị megharịrị atụmatụ n'efu ma ọ bụ nke akwụrụ ụgwọ maka ọwa gị, ị ga-ahụ ka ndị debanyere aha nke ọwa gị bidoro na-eto n'otu ụbọchị ahụ! Atụmatụ ọ bụla na-amalite ịrụ ọrụ ngwa ngwa iji mee ka ntụkwasị obi na mgbasa ozi gị na-emewanye.
Ndị otu anyị nwere mmekọrịta bịara ebe a iji nyere aka! Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ enyemaka na ihe ọ bụla, anyị bụ naanị email pụọ. Mgbe ị kpọtụrụ anyị, ị nwere ike ịtụ anya nzaghachi n'oge.
Nzọụkwụ Dị Mfe Iji Nweta Ndị Denyere Aha Na-adịghị
Idenye aha & Dị ka vidiyo
60 Sekọnd Oge, Emechara Gị!
Nọdụ ala azụ & Anata ndị debanyere aha gị n’efu
Achọrọ m ndị debanyere aha ugbu a
10 nke Uru dịkarịsịrị mkpa nke ndị debanyere aha na YouTube
Ihe kachasị mma na ndụ bụ n'efu; na ịrị elu nke mgbasa ozi mmekọrịta, kedu ihe dị mma karịa ndị debanyere aha YouTube n'efu? Ọ dị mma, ị nwere ike kpọọ aha opekata mpe ihe ole na ole ka mma; ma ihe dị mkpa bụ, ịgbaso gị na saịtị mgbasa ozi mmekọrịta, dị ka YouTube, abụrụla ihe dị mkpa n'ụwa taa.
“YouTube nwere nnukwu ọdịnaya dị ukwuu. Ma ọ nwere n'ezie ihe maka mmadụ niile. Ndị mmadụ na-abịakwutekwa m oge niile na-agwa m okwu maka etu YouTube siri gbanwee ndụ ha, otu ha siri mụta ihe ha na-echeghị na ha nwere ike ịmụ. ”
Ijeri ise. Nke ahụ bụ ọnụọgụ vidiyo YouTube ekesarala na saịtị ahụ ruo taa. Kemgbe e hiwere ya na Febụwarị 14, 2005, ikpo okwu na-ewu ewu vidiyo na-aga n'ihu na-adọta ndị ọrụ ọhụrụ na-ewepụta ọdịnaya na oke ọsọ. Mmekọ ịhụnanya ụwa na YouTube abụghị maka na emere ya na ụbọchị Valentine. Ọ dị mfe ịghọta ihe kpatara o jiri bụrụ ngwa ọrụ dị oke mkpa maka ndị ọrụ ka ha na -ejikọ ma na -agwa ha.
N'ezie, dị ka wlọ Ọrụ Nyocha Pew, ihe karịrị 20% nke ndị ọrụ toro eto gosipụtara na ha na-eji YouTube dị ka isi mmalite maka akụkọ. Nke ahụ na-eme YouTube ka ọ bụrụ saịtị mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị eji eme ihe maka akụkọ, n'azụ Facebook, ebe ọnụọgụ 43% nke ndị ọrụ tozuru etozu na-azọrọ na ha nwetara akụkọ ha. Kedu ihe ọzọ, dị ka Omnicore si kwuo, 75% nke puku afọ na-ahọrọ ikiri vidiyo YouTube na ikiri telivishọn ọdịnala.
Kedu ihe, ebe ndị mmadụ na-enweta ozi ha, gbasara ndị na-eso YouTube n'efu? Ọ dị mma, ọ dị mma ịnwe nghọta zuru oke banyere mmetụta YouTube nwere na omenaala anyị, yana otu ọdịbendị anyị si ewere ozi. Site na ihe ọmụma a, ị ga-enwe ike iru ndị na-ege gị ntị nke ọma.
Ọnụ ọgụgụ ahụ gosipụtara na ọtụtụ mmadụ na-atụgharị na saịtị dịka YouTube iji mụta banyere ihe na-eme n'ụwa, mana ọ kwụsịghị ebe ahụ. Ndị ọrụ YouTube na-amụta ụdị ozi dị iche iche na ihe niile site na otu esi etinye ntinye ọkụ, ka esi etinye etemeete. Ma ugbu a, karịa karịa mgbe ọ bụla, ndị ọrụ na-ekiri vidio vidio YouTube iji mụta banyere azụmahịa na ụdị.
Ọ bụ ebe zuru oke ịkwalite ụlọ ọrụ gị. Videokọ akụkọ vidiyo na-enye nkọwa dị mma nke ozi na ntụrụndụ, na vidiyo na-ewepụta ọtụtụ ozi na obere oge. Site na YouTube, ị ga-egosi ndị na-ege gị ntị otu anya na ọdịbendị ụlọ ọrụ gị ma kesaa ozi ha agaghị enweta site na mbipụta ma ọ bụ mgbasa ozi dijitalụ.
Ọ bụ ezie na YouTube dị mma maka ijikọ ndị ahịa dị ugbu a na ndị nwere ike, ịkwesịrị ịkwadebe maka asọmpi ahụ. Ihe dị ka 63% nke azụmaahịa etinyelarị YouTube na usoro azụmaahịa ha, ọnụọgụ ahụ ga-aga n'ihu na-eto.
A na-ejikọ ihe ọmụma dị ukwuu na saịtị ahụ n'otu oge, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịpụta. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 300 nke vidiyo ka a na-ebugo kwa nkeji. Ọ bụrụ na ị na-eme mgbakọ na mwepụ, nke ahụ karịrị awa 400,000 kwa ụbọchị, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 158,000,000 kwa afọ. Ga-etinye 18,000 afọ na-ekiri vidio vidio YouTube na akaụntụ maka 2018 naanị. Nweta foto ahụ?
Ihula ebe anyi na aga a; gụọ maka ihe asatọ kachasị mkpa iji nweta ndị debanyere aha na YouTube.
Mee ndị na-eso ụzọ ka ibu
Ihe mbụ mere ị ga-eji nweta ndị debanyere aha ha n'efu bụ ihe kwụ ọtọ-ịchọrọ ị wuo ọwa kachasị mkpa na-eso! Ma ị bụ onye ọrụ ọhụụ, ma ọ bụ ma eleghị anya ị nweela ọwa YouTube mana ị nwere nsogbu ịnweta traction, ụfọdụ ndị debanyere aha ndị ọzọ nwere ike ịga ogologo oge iji zụlite njikọ aka siri ike na ahụike dị mma.
Algọridim nke YouTube na-anabata ọwa nwere ọtụtụ ndị debanyere aha site na igosipụta ọdịnaya ha na ndị sara mbara karị. Nke a na - eme ka ikuku bọọlụ mee karịa nihi na ndị mmadụ na - ahụ ọwa gị, ọ ga - abụ na ha ga - edebanye aha ya.
Chọrọ ka a mata gị na saịtị mgbasa ozi ndị ọzọ
Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ nwere ike jikọta ọnụ maka onye ọrụ ọ bụla. Nke a na - eme ka ọ dị mfe ịkesa ọdịnaya n'ofe nyiwe, ma mekwaa ka ndị na - ege gị ntị bawanye. Ọ bụrụ na vidiyo na-ewu ewu na YouTube, enwere ohere dị oke elu na ndị debanyere aha ga-etinye vidiyo ahụ na akaụntụ mgbasa ozi mgbasa ozi ha ndị ọzọ. More ndị debanyere aha YouTube pụtara ọtụtụ ndị nwere ike inye aka gbasaa vidiyo gị na nyiwe ndị ọzọ. N’oge na-adịghị anya, vidiyo ahụ dị ka ebe niile, ma ị nwere ohere ịnweta ịrịa.
Ọ bụ nrọ TTuber ọ bụla. Gaa malitere ịrịa, mee ka ọtụtụ nde mmadụ hụ ọdịnaya gị, gbadaa na akụkọ ntolite YouTube na vidiyo vidiyo nke oge anyị dịka "Charlie Bit My Finger" na "Harlem Shake." O nwere ike iyi ka ọ bụ naanị "nkeji 15 nke ama," mana n'eziokwu, ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-ele ngwaahịa ma na-eme mkpebi ịzụta mgbe ha mụsịrị banyere ha na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụ ihe omimi ihe kpatara na ụfọdụ ihe na-aga viral, mana n'ozuzu, a na-ahụkarị vidiyo ndị nwere ogo dị elu nwere ọdịnaya egbu egbu. Mana, n'agbanyeghị etu esi chịkọta vidiyo gị nke ọma, ọ bụrụ na ịnweghị ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha mara mma, ọ na-enwe obi abụọ na onye ọ bụla ga-ahụ vidiyo gị. Inweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ pụtara na ọwa YouTube gị ga-apụta na "ọdịnaya akwadoro" YouTuber. Mmetụta bọọlụ snow ahụ na-apụ, na tupu ịmara ya vidiyo nke ika gị na-ekesa gburugburu ụwa site na nde mmadụ. Inweta ndị debanyere aha YouTube n'efu bụ naanị nzọụkwụ mbụ. Ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta ndị debanyere aha YouTube, jide n'aka na ịzụta ha n'aka ụlọ ọrụ a ma ama nke na-arụ ọrụ ma ọ dịkarịa ala ọtụtụ afọ ma nwee aha maka ịnye ọrụ dị elu, nke a pụrụ ịdabere na ya.
Naghachi site na vidiyo ole na ole na-ewu ewu
Mgbasa mgbasa ozi dị mma n'ihi na ọ na-enye olu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nọ na mbara ala. Onye ọ bụla nwere ike ịkekọrịta echiche ha site na iji bọtịnụ. Ma ihe ọma, ihe ọjọọ na-abịakwa, ndị ọrụ nwere ikike ka ukwuu ịkọ ọnụ ọjọọ na ụwa niile dịka ndị na-ege ha ntị. Y’oburu n’inweta ihe na-adighi nma nke mebiri onodu vidio gi, ime ka onu ogugu gi gha enyere aka igbochi nke a.
A na-akpọ ya nkwupụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọ bụkwa otu ụmụ mmadụ si amata ihe ị ga-eme na ihe ị na-agaghị eme. Ndị mmadụ na-achọkarị ihe ha na-eche na ndị ọzọ masịrị ha. Ihe megidere eme bu eziokwu; mmadụ ga-ekpebi ihe dị njọ ma ọ bụ nke na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ha ahụ ndị ọzọ na-ekwenyeghịkwa na ya. Ndị debanyere aha YouTube dị ka votu na ihu ọma gị, chee banyere ha dị ka nyocha dị mma. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọwa gị nwere vidiyo ole na ole na-enweghị mmasị mana ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị debanyere aha, ndị ọrụ ndị ọzọ ga-eche na akara gị na-ewu ewu, ma nwee ike ịgbaghara ihe ole na ole na-amasị gị ebe a.
Mee ka iwu kwadoro ika gị
Ọwa YouTube nwere naanị ndị debanyere aha ole na ole dị ka ha dị ọhụụ. Businesseslọ ọrụ ọhụụ ka na-adọta ndị ahịa n'ihi na onye ọ bụla chọrọ ịbụ onye mbụ ịchọta ebe ọhụụ "ya". Mana, mgbe uzuzu ruru ma ọ bụrụ na i wughi ndepụta ndepụta ndị buru ibu, ndị mmadụ ga-eche na enwere ihe na akara gị. Ọ bụrụ n’inweta ndị na - eso ụzọ YouTube n’efu, akara gị ga - adị ka ọ nọrọla ogologo oge iji meere onwe ya ezigbo aha. Nke a ga - ewulite ntụkwasị obi n’ebe ndị ahịa gị nọ wee bulie ohere ịrekwuo ngwaahịa maka azụmahịa gị.
Achọrọ ka azụlite YouTube gị
Dịka mmekọrịta ọ bụla, iwulite usoro mmekọrịta mmekọrịta dị mma bụ nnukwu nkwa. Oge ụfọdụ, azụmaahịa ga-enwe ndị ọrụ raara onwe ha nye nke na-ejikwa akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta ha. Ma ndị a anaghị arụ ọrụ n'efu. Ndị ọchụnta ego na-emefu puku kwuru puku dọla iji kpuchie ụgwọ ọnwa na elele kwa afọ, ụlọ ọrụ ọhụụ nwere akụkụ dị mkpụmkpụ pere mpe anaghị agakarị.
Nọgide na-enwe ọnụnọ mgbasa ozi ọha na eze bụ ọrụ oge niile n'ihi na ezughị ezu iji biputere vidiyo na YouTube ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara. Ọ chọrọ oge na ume iji tinye n'ọrụ, kesaa, ma kwuo okwu, dị ka, ile, ma soro ndị na-ege gị ntị rụ ọrụ, ihe dịka ị ga - asị na azụmahịa gị bụ onye dị adị. Ma ọ bụ njikọ onwe onye ahụ nke na-eme YouTube ka ọ bụrụ ngwa ọrụ bara uru! Enweghị ajụjụ ọ bụla azụmahịa gị kwesịrị ịdị na YouTube; ọ bụ naanị otu ị ga - esi rụọ ọrụ ahụ.
Nwere ike ịmalite nnukwu ọrụ ahụ n'onwe gị, mana ị nwekwara ọtụtụ azụmahịa ndị ọzọ chọrọ ka uche gị dịrị. Inweta ndị debanyere aha na YouTube n'efu na-ebu ibu nke iwulite ọnụnọ YouTube gị site na ịpụ n'ubu gị. Nwere ike izu ike dị mfe ịmara ndị na-eso ụzọ gị na-elekọta ma laghachi na ilekwasị anya na atụmatụ azụmahịa dị oke mkpa.
Igosi dị elu na ọchụchọ
Anyị ekwuolarịrị banyere otu algorithm nke YouTube si nwee ọwa na ọtụtụ ndị debanyere aha site na ikpughe ya na ndị na-ege ntị. Akụkụ nke a nwere njikọ na ebe ebe ọwa ndị a dị na nyocha. Ọ dị otu a, ka anyị kwuo na ị nwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ thatụ nke ama ama esi nri anaghị eri anụ. Ọ bụrụ na azụmahịa 'YouTube channel gị nwere ndị debanyere aha ole na ole karịa mmanụ griiz nke dị na mgbochi ahụ, vidio ha ga-apụta dị elu karịa ọchụchọ gị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na salad oyi gị nwere ike ịgbanwe nke kacha njọ nke anụ na-eri anụ. Yabụ, n'agbanyeghị etu ọdịnaya gị dị mma, yana ọnụ ọgụgụ dị ole na ole nke ndị debanyere aha gị, ị nwere ihe ize ndụ nke ịhapụ azụmaahịa na akara aka pere mpe.
Rụsiri ọrụ ike maka azụmahịa gị, ị chọrọ ijide n'aka na a hụrụ gị. Inweta ndị debanyere aha YouTube ga-enyere aka hụ na akara gị pụtara na elu nke ndepụta na ọchụchọ, yana ọdịnaya gị karịrị asọmpi ahụ.
Ọ bụ aghụghọ a ma ama nke ọtụtụ puku akaụntụ na-eji
YouTube bụ ihe dị otú ahụ bara uru maka ndị ahịa. Inweta ndị debanyere aha ọwa dị ka ịnwe ka ndị mmadụ debanye aha ha na ngwaahịa gị kwa ụbọchị. Ọ bụghị naanị na YouTube bụ akụkụ dị mkpa nke usoro ahịa ọ bụla mana ịnweta ndị debanyere aha na YouTube bụ otu n'ime ihe nzuzo kachasị mma na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ ga-eju gị anya na ọnụ ọgụgụ akaụntụ ebe ahụ na ndị na-abụghị ndị na-edebanye aha na ndị na-eso ụzọ. Moddị, ndị ọkwọ ụgbọ ala, ọbụlagodi ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, enwetala ndị debanyere aha YouTube maka akụkọ ha ma na-elele ọwa mgbasa ozi ha na-abawanye n'ihu ha.
Otutu n’ime anyi enwetala kredit Ad n’efu na Facebook. Ọ bụ otu ihe. Chee echiche inweta ndị na-eso ụzọ dịka ịkwalite post na Facebook, ha abụọ bụ ụzọ bara uru maka ịbawanye ndị debanyere aha gị. Nanị ihe dị iche bụ, ịkwalite posts na Facebook na saịtị ndị ọzọ dị egwu n'ihi na ị naghị ekwe nkwa ọnụọgụ ụfọdụ nke ndị na-eso ụzọ ma ọ bụ ọbụlagodi mgbe niile.
Mee ka azụmahịa na-abawanye
Dị ka azụmahịa ọ bụla, ịchọrọ ịbawanye akara gị. YouTube bụ ikpo okwu zuru oke iji tọghata ndị na-azụ ahịa na ndị ahịa maka ndụ site na ịkekọrịta vidiyo na-etinye aka na ika gị. Ọ na-eduga na nke a. Site na ndị debanyere aha YouTube n'efu, ị nwere ike iwulite ihe ndị ọzọ bara uru maka azụmaahịa gị. Site n'ebe ahụ, vidiyo gị nwere ike gbasaa na saịtị ndị ọzọ dị ka Facebook, ị na-eguzokwa ohere ịrịa ọrịa; ma na-ekpughe akara gị nye nde ndị ahịa. Anyị lerekwa uru ndị ọzọ anya, mana ihe ọ bụla kpatara kpatara ya bụ na ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị ndebanye aha YouTube ga-eduga n'ịba ụba azụmaahịa.
Nnọọ … Ọ bụ n'efu!
Ohere bụ isiokwu nke isiokwu a mere ka ị nwee mmasị. Free ndị debanyere aha YouTube bụ ihe a na-adịghị ahụkebe, mana enwere ụlọ ọrụ si ebe ahụ na-enye ndị debanyere aha! Ndị a abụghị naanị bọọlụ na-enyocha akaụntụ gị; ha bụ ezigbo ndị ọrụ na-enyere aka na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị ma nweta azụmahịa gị.
Ya mere, gịnị ka nke a pụtara maka azụmahịa gị?
Ihe Susan Wojcicki kwuru bụ eziokwu doro anya; YouTube nwere ihe maka mmadu nile. Dịka azụmahịa na YouTube, ezughi iji bụrụ ihe maka onye , ị kwesịrị ịgbalịsi ike ịbụ ihe onye ọ bụla . Dị ka ihe ijuanya dịka ọ nwere ike ịdị, YouTube abụrụla ihe a na-ewu ewu karịa telivishọn netwọk, ọbụnakwa eriri. Ndị ọrụ na-eche njikọ pụrụ iche na ikpo okwu na ọwa ha na-eso n'ihi anya dị nso ọ na-enye ha n'ime "ndụ" kwa ụbọchị nke ụdị. Inweta ndị debanyere aha YouTube n'efu bụ ụzọ kachasị mma iji wụlite ọnụnọ YouTube ma mepee ụzọ maka ọganiihu azụmahịa.
Nweta gị ndị debanyere aha YouTube n'efu ma bido njem gị na aha YouTube taa!
Ndụmọdụ maka ịmepụta vidiyo ogologo ogologo na-enwe mmetụta na YouTube
N'ezie, YouTube Shorts na-eme ebili mmiri na mgbasa ozi ọha. Mana ị maara na ọ fọrọ nke nta ka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekiri vidiyo ogologo ọdụ? Ndị a bụ vidiyo YouTube ogologo, ...
Ntuziaka gị maka ịmalite ọwa YouTube ụlọọrụ
Ọwa YouTube ụlọọrụ bụ n'ezie ọwa YouTube maka azụmahịa. Ọ bụ ezie na YouTube anaghị ekewa n'etiti ọwa onye ọ bụla na nke ụlọ ọrụ, enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime.
Kedu mkpado ole ka ị ga-eji maka ọhụhụ YouTube ka mma?
YouTube abụghị naanị ikpo okwu na-enuba vidiyo - ọ ghọkwara igwe nchọta. N'ezie, ikpo okwu Google nwere bụ nke abụọ naanị Google n'ihe gbasara ọchụchọ...
Ebe a na SubPals, anyị na-anya onwe anyị ọnụ maka ọrụ pụrụ iche yana ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Ejila okwu anyị naanị maka ya - lelee nyocha ndị ahịa anyị n'okpuru.
Abụ m onye okike ọdịnaya, enyerela ya aka n'ezie n'ihi na Subpals agbakwunyela ndị debanyere aha na ọwa m kwa awa 12 ọ bụla.
Webụsaịtị a dị mma maka ndị na-eto eto youtubers chọrọ mkpali. M malitere na ndị debanyere aha 80 ma ugbu a enwere m 500.
Anọ m na-achọ obere ndụmọdụ iji nweta ndị debanyere aha maka ọwa YouTube m na ịntanetị mgbe m sụrụ ngọngọ na SubPals na enwere m ntakịrị azụ azụ n'ezie, na-eche na ọ ga-abụ ojoro. Ọ dabara nke ọma na ọ bụghị na enwere m ike nweta ezigbo ndị debanyere aha iri n'ime nkeji ole na ole! Ana m akwado nke ukwuu, gbakwunyere na ị nwere ike iji ọrụ ha n'efu otu ugboro n'ụbọchị;)
Ebe nrụọrụ weebụ mara mma, ị ga-enweta ndenye aha n'efu. Ọ nweghịkwa nje. Dị oke egwu. Lelee webụsaịtị a. UGBUA!
Ọrụ dị ezigbo mma na ọnụ ahịa dị oke ọnụ, hụ ụdị dabere na ndenye aha n'anya. Echiche na subs bụ organic.
Ọ na-ewe ihe dị ka ọkara elekere iji nweta atụmatụ efu, nke na-enye gị nkeji 10sub kwa awa 12 ọ bụla, n'agbanyeghị na ịkwesịrị iji aka mee ya. Ọ na-enye aka maka ndị ọhụrụ chọrọ itolite ọwa yt ha. Saịtị ahụ dị mfe ịnyagharịa.
N'ime ihe niile Youtube sub maka sub webụsaịtị dị n'ebe ahụ, Subpals ga-abụ nke kacha mma, kwa awa 12 ị nwere ike gwerie ndị debanyere aha 10 nke mara mma, jide n'aka na ụfọdụ ndị ga-ewepụ aha ya bụ ihe nwute bụ ihe weebụsaịtị dị ka ndị a enweghị ike igbochi. , M na-eji sub pals n'oge gara aga na site na ahụmahụ m, ọ bụ ụzọ kasị mma iji nweta ndị debanyere aha YouTube.
- ọnwa X.
Ya mere ịtụnanya nwetara ọtụtụ subs na mmasị enweghị ike ikwere na saịtị a bụ n'ezie n'ezie ma ọ na-arụ ọrụ nke ukwuu mma.
Kachasị mma kacha mma, akwadoro nke ukwuu maka onye ọ bụla. Jiri ọrụ ha, n'ezie ịtụnanya. Ana m enweta subs maka ọwa m mgbe niile..
Ụzọ kacha mma iji nweta ndị debanyere aha na youtube ọ were oge mana ọ bara uru ma na-arụ ọrụ ya mere m na-akwado ya!
Ndị debanyere aha bụ ezigbo nke anyị na-enweta na subpals.com. M ga-akwado gị ka ị rụọ ọrụ na subpals.com maka nkwalite ọwa YouTube. Daalụ
ezigbo ọrụ. Atụmatụ efu na-arụ ọrụ
Ọrụ mara mma nke na-enyere ọwa m aka ito eto. Enwere ọtụtụ ihe inye onyinye kwa izu nke dị ịtụnanya n'ezie.
Ọwa YouTube m JE Imposters nwetara ọtụtụ ndị debanyere aha na SubPals! Naanị otu izu ka m na-eziga ma enwere m subs 30 ugbua! Dị ka nke ahụ dị ịtụnanya na saịtị a na-arụ ọrụ n'ezie ma ana m akwado ya nke ukwuu
Ọ dị mma, enwere m obi ụtọ na ọ mere ihe ọ na-akwalite! Ha na-enye gị subs n'ime ihe nke nkeji ma yie ihe a pụrụ ịdabere na ya
- eme a.
nnukwu ikpo okwu pụrụ iche maka beginners!
Ahụrụ m weebụsaịtị a n'anya nke ukwuu. Ị nwere ike nweta ụfọdụ ndị debanyere aha n'efu naanị maka mmasị na ịdenye aha ụfọdụ ndị mmadụ.
Nke a dị ezigbo mma iji ya dịka m na-eji ya maka izu abụọ ugbu a n'enweghị nsogbu. yabụ echere m na ndị na-achọ itolite ntakịrị ngwa ngwa kwesịrị ịga jiri saịtị a
- enweghị atụ
Ọ mara mma nke ukwuu, 100% tụrụ aro, rụọ ọrụ nke ọma, ọ bụrụ na ịchọrọ itolite, nke a bụ weebụsaịtị gị. Ana m akwado maka youtube
Ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma mgbe ọ bụla! Ga-anwale ọzọ! Dị ka ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na ọwa gị, nke a ga-enyere ya aka kpamkpam!
Obi na-adị m ezigbo ụtọ ka m sonye na webụsaịtị a. Ma a kwadoro m unu niile ka unu sonye ebe a.
Nke a bụ ngwa dị ịtụnanya, ọ na-enye gị ndenye aha n'efu! N'ezie ga-akwado ha ebe ọ bụ na subs ndị a nwere ike ịba uru.
Magburu onwe! Ị na-enweta gburugburu 15 ndị ​​debanyere aha everytime na naanị ida gburugburu 3. M wee si 9 ka a obere ihe karịrị 30 na 2 ụbọchị!
Zụlite ọwa gị n'ụzọ dị mfe site na ịdenye aha ndị mmadụ! Ana m akwado gị ka ị nwaa nke a! Ị gaghị akwa ụta na saịtị a nwere ezigbo ọrụ. Ọ bụrụ na ịzụrụ ndenye aha ebe a dị ka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ihe ọzọ, ị ga-abụ onye ama ama n'ime obere oge ...
Service Nyocha YouTube Channel ($ 120)
Nyocha vidiyo dị omimi nke ọwa YouTube gị + nyochaa ndị na-asọ gị asọmpi 5-usoro ihe omume maka usoro ọzọ ị ga-eme.
Service 1 YouTube vidiyo SEO ($ 30) 3 vidiyo YouTube SEO ($ 80) 6 vidiyo YouTube SEO ($ 150) 12 vidiyo YouTube SEO ($ 280)
Nyocha zuru ezu nke vidio vidio YouTube gị, na-enye anyị ohere inye gị aha Mbụ + Nkọwapụta + 5 Keywords / Hashtags.
Nyocha vidiyo SEO zuru ezu
1 Enyere Aha E Kwadoro
1 Enwetara Nkowa enyere
5 Okwu nyocha / Hashtags
Service 1 Channel Banner Design ($ 80) Ihe ngosi vidiyo nke vidiyo 1 ($ 25) Ihe ngosi vidiyo nke vidiyo 3 ($ 70) Ihe ngosi vidiyo nke vidiyo 6 ($ 130)
Onye ọkachamara, emegharịrị ọwa YouTube Channel Banner na YouTube Video Thumbnails.
Ọdịdị Nlekọta Ọkachamara
Omenala iji kwekọọ na ụdị gị
Ihe siri ike & itinye aka na imewe
Ezigbo Oke & Ogo maka YouTube
Mma gị Click-Thru-Rate (CTR)
Oge nnyefe: ụbọchị 1 ruo 4
Jikọọ karịa 1 Nde YouTubers ndị na-arụsi ọrụ ike na-akwalite ọwa ha na ndị debanyere aha na YouTube n'efu!
Nweta oke asọmpi gị na ndị debanyere aha YouTube n'efu site na iji netwọọdụ nnyefe nke SubPals!
USA & Ike: 888-881-9070
... na ọtụtụ ndị ọzọ!
Nwebiisinka © 2022 SubPals (subpals.com). Ikike niile echekwabara. Sitemap
Usoro Ọzụzụ vidiyo
Nbanye Onye otu
Otu esi ejikwa ndị na-aza ajụjụ spam na Akaụntụ YouTube gị?
Nkwuputa nwebiisinka YouTube vs. YouTube Strik